फ्रान्क लाम्पार्ड चेल्सीको प्रशिक्षक ? - Paschimnepal.com
फ्रान्क लाम्पार्ड चेल्सीको प्रशिक्षक ?
काठमाडौं । फ्रान्क लाम्पार्ड चेल्सीको प्रशिक्षकका रुपमा तीन वर्ष सम्झौता गर्न तयार भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । लाम्पार्डसँग चेल्सीले अबको ४८ घन्टाभित्र सम्झौता गर्ने सम्भावना रहेको चेल्सी फुटबल क्लबले जनाएको छ ।
पश्चिम लण्डन क्लब चेल्सीकै पूर्व खेलाडी लाम्पार्ड हाल डर्बी काउन्टीको प्रशिक्षक छन् । उनले गत वर्षमात्रै प्रशिक्षकका रुपमा आफ्नो करियर सुरु गरेका हुन् । गत सिजन डर्बी काउन्टी प्रिमियर लिगमा बढुवाका लागि प्लेअफसम्म पुगेको थियो । उनको प्रशिक्षणमा डर्बीले गत सिजनमा आक्रामक फुटबल खेलेको थियो ।
लाम्पार्डले चेल्सीमा १३ वर्ष बिताउँदा ११ उपाधी जितेका थिए । उनी चेल्सीका सर्वाधिक गोलकर्ता पनि हुन् । उनले चेल्सीका लागि २ सय ११ गोल गरेका छन् । चेल्सीको प्रशिक्षक बनेमा उनले मोउरिजियो सारीलाई विस्थापन गर्नेछन् । सारीले यसै महिनाको सुरुमा युभेन्टसको प्रशिक्षक बन्नका लागि चेल्सी छाडेका छन् । चेल्सीका लिजेन्ड लाम्पार्डका लागि चेल्सीको मैदान सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार १७, २०७६ 10:22:14 PM
Prevअमेरिकाले नेपालीका लागि भिसा शुल्क घटायो
Nextनेपोलियनलाई मद्दत गर्ने देवता